FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA AN-TENDROMBOHITRA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika an-tendrombohitra
Gray's Trigger (lahy tricolor) Treeing (aka Mountain) alika Feist dia voasoratra anarana ao amin'ny National Kennel Club (NKC) sy ny United Kennel Club (UKC) - 'Mihaza kalalao amin'ny alika izahay, fa bitro ary ny vorona lalao koa. ' Sary natolotry ny Treeing (aka Mountain) Feist
Ny palitaon'ny Mountain Feist dia fohy sy malama. Ny loko palitao dia misy ny tricolor misy tasy, mena sy fotsy, mena, mainty, mainty sy mainty, manga sy fotsy, borosy mena ary fotsy. Ny loha dia misy vava antonony lava miaraka amin'ny karandohany somary boribory. Kely ny maso ary miloko mainty. Ny sofina dia miorina tsara amin'ny sisin'ny loha, miendrika wedge ary mitazona na semi-erect. Ny molotra dia lava salantsalany ary taper amin'ny teboka iray. Ny orona dia mainty ary miloko araka ny palitao. Ny manaikitra dia hety na haavo. Ny hatoka dia lava halavany ary matanjaka. Haavo ny topline. Somary lalina ny tratra ary misy tadiny tsara. Mahitsy sy matanjaka ny lamosina. Mahitsy sy mahery ny forelegs. Hozatra ny tongotra Hind, misy hock kely miondrika. Kely sy matevina ny tongotra, misy rantsan-tongotra sy tohotra matevina. Atao avo ny rambony ary atsangana. Hetsika: Haingam-pandeha ary mailamailaka tokoa, miaraka amin'ny fivezivezena mikoriana.
Be fanahy, nefa be fitiavana. Ny mpiompy amerikana dia mamboly karazany telo samy hafa: ny Mountain Feist, ny Feist tongotra tongotra Bench ary ny Pencil-tail Feist. Ho an'ny fihazana squirrel, alika io dia tsara indrindra. Ireo alika ireo koa dia mandray bitro, vorona ary lalao kely rehetra. Hamarino tsara fa ianao izao mafy ny alika, fa milamina , matoky tena, mpitarika fonosana tsy miova .
Hahavony: 10 - 22 santimetatra (26 - 56 cm)
Lanja: 10 - 30 pounds (4,5 - 13,5 kg)
Miaina mihaza ity karazany ity. Amin'ny andro dia tsy azo atao mihaza izy dia mila raisina a mandeha lavitra na jogging. Raha mitarika ny alika dia tokony hatsangana eo anilany na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary io mpitarika io dia mila ny olombelona.
10 ka hatramin'ny 15 taona
Mora volo ny Mountain Feist. Ny fikosehana sy ny fikosehana tsindraindray hanalana ny volo maty no ilaina.
Alika totohondry (natsipy teny amin'ny faritra samihafa sy fe-potoana 'fyce' na vanim-potoana) dia efa am-polony taona maro raha tsy taonjato maro talohan'izay Rat Terriers dia nentina tany Amerika. Abraham Lincoln dia nanoratra tononkalo izay nanonona alika 'vola' alohan'ny ady an-trano. George Washington koa dia nanonona ireo alika tao amin'ny diariny.
ATFA = Fikambanan'ny zavamaniry mpihaza amerikana
'Bear dia Amerikana Feist izay manana ra mandondona. Alika miavaka izy ary manana ho avy mahatalanjona. Lasa alika irina mafy izy amin'ny fahatanorany. ' Sary natolotry ny Kennels Alika ho an'ny Squirrel Mountain Valley
'Grommet dia American Treeing Feist, vehivavy, aseho eto amin'ny herintaona. Manana angovo tsy voafetra izy, ary tia alika sy olona isan-karazany. Tiany ny milalao fanenjehana, mihaza zavatra hanenjehana, milomano, mihady fasika ary matory ao ambanin'ny fonony. Izy dia biby fiompy mahafinaritra, ary tena mamporisika an'ity karazana ity ho an'izay mitady alika mavitrika sy mahafinaritra ary be fitiavana. Mila fanatanjahan-tena sy fotoana filalaovana be dia be izy ireo, indrindra amin'ny alika hafa. '
Kentucky Jody (vavy volondavenona sy fotsy) Treeing (aka Mountain) Feist alika, dia voasoratra anarana ao amin'ny National Kennel Club (NKC) sy ny United Kennel Club (UKC) - 'Mihaza kalalao amin'ny alika izahay, fa ny bitro sy ny vorona lalao ihany koa.' Sary natolotry ny Treeing (aka Mountain) Feist Squirrel Dogs
Cricket dia Smokey Mountain Feist voasoratra anarana hita eto amin'ny 6 taona.
Kodi the Mountain Feist mihanika hazo
Kodi the Mountain Feist milalao amin'ny lanezy
hareza sisin'ny pitbull orona mena
Sally Jo ilay alika kely any an-tendrombohitra
'Pop-i dia mpamonjy. Izy dia tena mpahazo ny zana-kazo maloto ary tsy misy mitafy eo amin'ny fahitana na ny fofon'ny squirrel. Mampalahelo fa (soa ho ahy) ny tatitra momba ny basim-borona dia mampihorohoro azy noho izany ny antony nariana azy. Ilay tovolahy kely sy ny sakaizany, y2Katy Doodle Bug, dia miaina ao anaty vala farany amin'ny toeram-pambolena lavitra any an-tendrombohitra East Tennessee. Valo taona izao i Pop-i ary manana herin'ny alika kely. Izy dia sosialy, mpanao fanatanjahan-tena ary snuggler mahay. Lehilahy iray izy izay ny fahazarana mampiahiahy fotsiny dia ny manadio ny sofin'ny sakaizany aorian'ny fisotro rano. izy mila fanatanjahan-tena be dia be , mankafy ny enjehina amin'ny trano ary mifatotra amin'ny tadiny ary mandeha isaky ny misakafo. Izy dia mpiara-miasa mahafinaritra, tsara bika ary mahalala tsara bika. Amin'ny alina mangatsiatsiaka dia hifoha ny palitao malefaka vita malefaka mifamihina hamely ahy aho. Hitsiky ianao rehefa miditra ao amin'ny efitrano… zazalahy kely miavaka izy. '
Pop-i the Treeing Feist mitsambikina amin'ny vavahadin-jaza
Jereo ny ohatra misimisy kokoa momba ilay Tendrombohitra Feist
Sarin'ny Tendrombohitra Mountain 1
jack russell frantsay bulldog mifangaro
dachshund mifangaro amin'ny spaniel akoho
fantsom-boalavo corb pitbull